I-Boron Nitrride ye-Bn Evaporation ye-Evapored kwi-Alweminium
Umzi-mveliso we-Boron Nitrride i-Bn Evaporation Isikhephe, i-Boron Nitrride itanki ye-Evaporation, iBoron Nitrride iPAN
I-Boron Nitride i-Bn Evaporation Isikhephe, inkqubo yonke ye-vacuum eshushu i-vacugung ukwenziwe phantsi kokukhuselwa kwe-vacuum kunye negesi ye-intert. Yoyisa i-phenomenon yezinto eziluhlaza okwenziwa, yahlukaniswa kwaye ikhutshelwe kubushushu obuphezulu kwixesha elidlulileyo, iqinisekisa imeko yenkunkuma ephambili, kwaye ikhuthaza isikhephe esiphumayo kunye nemveliso egqityiweyo.
I-Boron icinezelweyo yeBoron Nitride bn yenziwa kusetyenziswa inkqubo eshushu yokucinezela, kwaye iza njengesixhobo esimhlophe esimhlophe. Inokuba ngoomatshini besebenzisa i-carbide esemgangathweni
ukuqhuba. Ngenxa yokuqina kwekristali, i-Bn ngumbane we-anisotropic ngombane kwaye ngokwenu. I-Bn ibonisa ukunganyangeki okuphezulu kombane, iphantsi
I-Diectric Hostant kunye nelahleko ye-Tangent, ukwanda komhlaba okuphantsi, ukungaphumeleli kwamachiza, kunye nokunganyangeki kothusayo.
I-2.ugh yomatshini ifomula yefomula, ukunyanga kunye nokucinezela inkqubo
4.Nqinisa indawo yokucima umlilo
Ishushu icinezelwe i-Bn Boron Nitrride i-Evaramic Evarator i-Evable / tray
Isikhephe / i-cylindrical / isikwere / inkohliso
I-130 * 30 * 30mm / yenziwe ngokwezifiso
Ukunyibilika, ukunyibilika, ukuvavanywa, uhlalutyo lwe-thermal
I-T / T, intlawulo ye-intanethi ngekhadi letyala ifumaneka
Izithuthi zomoya: ngeentsuku ezingama-5 ukuya kwengama-5 ukuya kwi-10; Ukuhanjiswa kolwandle: malunga nenyanga enye.
1.stock: Ukuhanjiswa ngaphakathi kweentsuku ezingama-3-5 emva kokufumana intlawulo yakho.
2. I-OEM / ODM: Ixesha eliqhelekileyo le-15 leentsuku, ezixhomekeke kwi-8-
Iiyure ezili-12 ukuya kwezi-22
<I-1850 ° C
Ixabiso lokuphuma kwi-levaporation (i-1450 ° C)
I-0.4-0.5G / min.cm2
Ukusebenza kwe (I-1450 ° C)
Ukuqhutywa kobushushu (i-1450 ° C)
Ubunzulu obushushu obushushu
-Iqondo lobushushu ephezulu i-rods
-I-thermocouple yoKhuseleko lweThebhu
-Bumbeke ngentsimbi enyibilikayo, isabelo, umhlaba onqabileyo njlnjl.
-Kubethelelwe kwi-Eleam ye-Electroni
-I-nozzle ye-amorphous ye-magnetic strip
-I-nozzle yentsimbi yentsimbi kunye ne-magnetic ye-magnetic
-I-inshurensi ye-arc kunye ne-washer ye-PV kunye nePolysilicicicon Itnoce